KTO-USA: စစ်အစိုးရ စစ်သားများ စိတ်ကြွဆေး တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ယာမ မူးယစ်ဆေး အသုံးပြုနေ
စစ်အစိုးရ စစ်သားများ စိတ်ကြွဆေး တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ယာမ မူးယစ်ဆေး အသုံးပြုနေ
Posted by Admin Wednesday, November 9, 2011
နိုဝင် ဘာလ ၉ ရက် K.I.A တပ်မဟာ (၃) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများနှင့် စစ်အစိုးရ စစ်တပ်တို့အကြား ဗန်းမော် လွယ်ဂျယ် ကားလမ်း ခဝမ်ဘန်၊ လော်ဒန် အောက်မှာ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရပါတယ်။
ပါးစပ်က ဘုရား..ဘုရား..လက်က ကားယား..ကားယား ..ဘဲ ထင်ပါရဲ့..
စစ်အစိုးရ စစ်တပ်မှ အထက်လူကြီးမျးဟာ မိမိ စစ်သားများ တိုက်ပွဲကို ရဲရဲဝင့်ဝင့် တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ အတွက် စိတ်ကြွှဆေး တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ယာမကို စားစေပြီး စစ်ပွဲများကို ဝင်ခိုင်းနေကြောင်း သိရှိ ရပါတယ်။ ဒီစိတ်ကြွဆေး ယာမ ဟာ ကမ္ဘာက လိုက်လံ တိုက်ဖျက်နေတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး တစ်မျိုး ဖြစ်သော်ငြားလည်း စစ်အစိုးရတို့ဟာ ယခုလို တရားဝင်အဖြစ် အသုံးပြုနေတာကို တွေ့မြင် နေရပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် ရွှေညောင်ပင် ဂါးရာယာန် ဘက်မှာ K.I.A တပ်များနှင့် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ စစ်အစိုးရ စစ်သား များလည်း စိတ်ကြွဆေး တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ယာမ ကို အသုံးပြုနေကြောင်း ယခုလို… “ဟုတ်တယ်..သူတို့ (စစ်အစိုးရ စစ်သားများ) ကို ကြည့်ရတာ တမျိုး ထူးခြားနေ သလိုဘဲ.. ပိုပြီးမှ ရဲတင်း လာ သလိုမျိုး တွေ့ရတယ်.. ဒါပေမယ့် တချို့ စစ်သားတွေ ကြတော့ ကြောင် သလိုလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်.. စိတ်ကြွဆေး ယာမ အနိတင် ပြေသွားတဲ့ အချိန်ထင်တယ်..” လို့ မြင်တွေ့ ခဲ့တဲ့ ဒေသခံမှ ပြောကြားလာပါတယ်။
တဘက်မှာ ဘာဘဲဖြစ်နေ ဖြစ်နေ တစ်ဖက်မှာလည်း နယ်ခြားစောင့်တပ်များလက်ခံ ထားတဲ့ ဇခုန်တိန်ယိန်း (NDAK) ကချင်ပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄) နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် လဆန်အောင်ဝါ (K.I.O ခွဲထွက် လဝါးယာန်) တို့ဦးဆောင်ကာ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ကချင် ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ ဆရာဂွန်ရှောင် ပိုင်တဲ့ YMCA ခန်းမတွင် ပြည်သူ လူထု များကို တွေ့စုံ ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခုပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ W.P Mosesashiga re
တိုက်ပွဲပြင်းထန်နိုင်၍ မိုင်ဂျာယန် ဒေသတွင် စာသင်ကေ...
Dai ni na Majan shiga ( Majan wan grai grung wa ng...
ကေအိုင်အေ ဒုတိယအကြိမ် သိန်းစိန်နင့် တရုတ်နိုင်ငံ မ...
မန္တလေး၌ ကချင်စစ် ရပ်စဲရေး ဆုတောင်း၍ ဒုက္ခသည်များသို...
Thanksgiving Day 2011-USA Kachin groups
ကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို မွန်လူငယ် အဖွဲ့မှကူညီ...
ဒေါ်စုပါဝင်မည့် ပင်လုံကဲ့သို့ ညီလာခံ ဖြစ်ပေါ်ရန်ဖေါ်ေ...
သမ္မတကြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဗွီဒီယို နှင့် စင်ကာပူ...
ချင်းခရစ်ယန်အသင်းက ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် ကျ...
Open letter to World Leader final.pdf
Matai htang ra sai
Ahkyak shiga gabaw ni
ဗမာအစိုးရ၏ အောက်တန်းကျသည့် လုပ်ရပ်တွေ အချိန်မနှောင...
Pictures: No. 1 lang na Myitkyina mare hta terreis...
YMCA-Nov 09,2011 Myitkyina Kachin land
- ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရ ၊ NLD နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တိ...
စစ်အစိုးရ စစ်သားများ စိတ်ကြွဆေး တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ယာ...
မြစ်ကြီးနား -ဆဒုံး-ကန်ပိုက်တီ လမ်းပိုင်းသို့ မြန်မ...
Myu tsaw dik ai shayianum htet ga
HPYEN YEN TSIN YAM NI A MATU WASHINTON DC KAW GAT ...
USA KAA kawn Kachin refugee IDP ni hpe garum nga a...
Copyright 2009 : KTO-USA: စစ်အစိုးရ စစ်သားများ စိတ်ကြွဆေး တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ယာမ မူးယစ်ဆေး အသုံးပြုနေ Monezine Blogger Template Designed By Jinsona Design | Blogger XML Coded By CahayaBiru.com